Abazali abaninzi ekuzalweni komntwana oneminyaka engama-18 ubudala baxhalabile, banokwesaba umntwana wabo. Kwaye wonke umntu unomdla kumbuzo wendlela ukuphuhliswa kwengane engaphambi kwexesha kufuneka yenziwe ngayo ngeenyanga. Emva koko, la bantwana bafuna unonophelo olukhethekileyo kunye nengqalelo. Eyona nto ibalulekileyo kwiintsana ezingaphambi kokuzalwa ngumnyaka wokuqala wobomi, apho bazinzima khona.
Yiyiphi umntwana ethathwa njengengaphambi kwexesha
Usana lungekafiki, luvela kwi-iveki yama-21 ukuya kwe-36 yeveki yokukhulelwa, ngesisindo esingaphezu kwama-2500 amagremu kunye nokuphakama kwe-46-47 cm. Ukuthelekiswa neentsana eziqhelekileyo, umntwana usanda kukhula kwaye uphuhliso lwawo luhluke , wazalwa ngexesha. Ngokwezibonakaliso zomzimba, umntwana oqalayo ekuphuhliseni "uyabamba" kunye nosana oluqhelekileyo unyaka ukuya kwiintathu, ngaphandle kokuba ugula.
Indlela umntwana oza kusengaphambili aqala ngayo ngenyanga
Ngenyanga yokuqala yobomi, iintsana ezisengaphambili zinomngcipheko okhulayo wokuphuhlisa izifo ezazisasazekayo ezinokuthi zenzeke ngeengxaki. Ubunzima kwinyanga yokuqala emva kokuzalwa, umntwana uzuza kakhulu kakhulu. Ngentuthuko enhle, umntwana kufuneka abe ne-reflex yokugwinya. Akunqabile, ukuba le ngcamango ingekafumaneki, iintsana ezinjalo zondliwa ngeprobe. Kubantwana abanjalo, ngesisindo somzimba esingaphantsi kwama-3 kg, inkqubo ye-nervous is stable kwaye le meko ingabanjwa kwiinyanga ezi-4. Nangona umntwana engakwazi ukufunda ukuphefumula ngokwalo, ukunikezelwa kwe-oksijeni yokufakelwa kuyimfuneko. Kuyimfuneko ngeli xesha ukuxubana nomama kunye nosana, ukugcina ilizwi kunye noqhagamshelwano olunxibelelwano.
Umntwana osandul 'ukuqala uqala ukuthoba ubunzima kwinyanga yesibini yobomi. Oku kuboniswa ngophuhliso lwayo oluhle. Intloko ayikwazi ukuphakanyiswa ngabantwana abanjalo, ngokuchasene nabantwana bexesha elipheleleyo. Ngethuba lokutya, abantwana kwinyanga yesibini yobomi banxibile kakhulu, kufuneka badityaniswe nebele ibonise ubisi. Ukunyusa umntwana ngeli xesha kuyimfuneko kaninzi.
Ngenyanga yesithathu, umntwana osandul Umntwana ukhathazeke kakhulu ekuthinteni, nangona akakwazi ukumamatheka okwamanje. Kubantwana abanjalo kubaluleke kakhulu ukugcina urhulumente weqondo lokushisa. Ubushushu begumbi kufuneka libe ngama-degrees angama-24. Usana kufuneka lufake ngokufudumele. Kulo gumbi apho umntwana ekhona khona, ukukhanya okukhazimulayo akufanele kube khona. Amaxesha okuvuka kweli xesha lobomi asemfutshane kakhulu, umntwana uphantse ukulala, kodwa kubalulekile ukutshintsha isikhundla somzimba womntwana.
Ukuphakamisa nokubamba intloko yeintsana ezisekuqaleni kwinyanga yesine. Uqala ukwenza izandi nokulungisa amehlo akhe. Ngeli xesha, unokuqala ukwenza umntwana ukusila. Kuba umntwana unconywa: iinkqubo zamanzi, ukunyuka kwizandla, iibhafu zomoya.
Kubaluleke kakhulu kubazali ukuba bazi ukuba umntwana ukhula njani ngeenyanga, ukuze alandele ukuphuhliswa kwawo. Ngenyanga yesihlanu, iintsana ezingaphambi kwexesha sele zizama ukudlala, ukumomotheka, ezinye zize zibambe ezi zinto.
Ngeminyaka eli-6 ubudala, umntwana osandul 'ukukhula unyusela ubunzima bokuqala obu-2-2.5 amaxesha, ukhula ngokukhawuleza kwengqondo yengqondo. Ingane kule minyaka iphendulele intloko yayo, idlala kunye nemidlalo, iphendulela kwimithombo yomsindo. Kule minyaka ubudala umntwana ekuphuhlisweni uqala ukuthetha nokuphuhliswa kwengane evamile. Abanye abantwana sele behlula abahlobo babo kubantu abangabazi.
Ngenyanga yesixhenxe emva kokuzalwa, umntwana usenokuguquka kwisisu esisemva, udlala ngokubanzi.
Ngenyanga yesibhozo umntwana ujika ngokulula, ukuhamba okusebenzayo kuqala. Usuke uxelisa ukukhwela - uphuma kuzo zonke ezine kunye nokuguquka. Ingane inokuyidla kwi-spoon.
Sekuqaleni kwinyanga yeshumi elithoba yebomi umntwana udlala ngokudlala kunye nemidlalo, uqala ukuma emilenzeni, ebambelele kwisithintelo, ngengalo exhaphakileyo ihlala yedwa ecaleni. Ngethuba lokutya, uzama ukutsala iimpahla zokutya emlonyeni wakhe.
Ngeenyanga le-10, umntwana osengaphambi kwangoko unokunyuka kunye nenkxaso kwiinyawo zakhe, uthetha izandi ezahlukahlukeneyo kakuhle, uqaphelisise izinto ezihambayo.
Ngenyanga yeshumi elinesibini umntwana usebenza ngakumbi, uphendulela egameni lakhe, aqhube okanye ahambe ngendlela ye-plastunist.
Sekudlulileyo ngonyaka, abantwana banokubambisana kakhulu nabantwana bexesha elipheleleyo ekuphuhlisweni, baqala ukubiza izilwanyana. Kodwa akunakwenzeka ukukhawuleza izinto kubazali (kusasa kakhulu ukubeka imilenze), umntwana kufuneka athuthuke kancane, kuxhomekeke kwimpawu.
Ukuphindaphinda rhoqo kwiintsana
Ukufundiswa kwabantwana abaselula abaneminyaka eli-8 ukuya ku-16: ukuphucula amandla kunye nokuguquguquka kwemisipha
Ukuphuhliswa komntwana kusuka ekuzalweni ukuya kunyaka owodwa
Inyanga yesibhozo yobomi bentsana
Yintoni omele uyayizi malunga nokuncelisa?
Amanzi okuhlambela ityuwa kubantwana
Beyonce - phambi kwiplanethi yonke
Yintoni ekumele ingabi kwidirebhe yebhinqa lefestile emva kwe-30: Izinto ezi-TOP 5 omele uzilahle kuzo!
Kuthekani ukuba ndilala nomhlobo wamhlobo?
Iimfihlelo eziphambili zokuzithemba ngokupheleleyo
Ukuphuhliswa kwabantwana ebusheni
Uhlobo lwezinja Akita Inu
Halva of manga
Isaladi yesithelo esihle
Ikhukhi kunye nezizaliso ozikhethayo
Impembelelo yobumnyama kwimpilo yabantu
Uhambo olujikeleze i-capital yaseFransi. Icandelo 2